Baolina kitra – Belzika :: Lasibatry ny fanavakavaham-bolonkoditra i Marco Ilaimaharitra • AoRaha
Baolina kitra – Belzika Lasibatry ny fanavakavaham-bolonkoditra i Marco Ilaimaharitra
Nirotsaka ny ranomason’i Marco Ilaimaharitra, mpilalao iraisam-pirenena malagasy mila ravinahitra any Belzika, teny ambony kianja, ny alahady alina lasa teo.
Lasibatry ny esoeso sy fihe­tsika mampiseho fanavaka­vaham-bolonkoditra ity mpilalaon’ny Barea ity, nandritra ny lalao nihaonan’ ny Charleroi (ekipany) sy ny Malines, izay tafiditra ao anatin’ny fifaninanam-pirenen’i Belzika. Niafara tamin’ny isa 2 sy 2 ny lalaon’ ny roa tonta tamin’izany saingy nampalahelo an’ity mpilalao malagasy ity ny fihetsika nataon’ireo mpijery taminy.
Nihiakiaka mafy ireo mpanohana ny ekipan’i Malines nanao ireo fihetsika nanesoeso azy, ka henon’i Marco Ilaimaharitra. Tena nalahelo mafy izy, vokatr’ izany, ka saika sendaotra mihitsy. Niezaka ny nanazava tamin’ny mpitsara izy, niaro tena, fa “misy fihetsika manavakava-bolonkoditra hitany”, saingy karatra mavo ho azy no nasetrin’ity farany izany. Noho io karatra mavo io dia voasazy tsy hiatrika lalao manaraka ataon’ny Charleroi i Marco Ilaimaha­ritra ka nirotsaka ny rano­masony. Niezaka ny nampahery azy ireo mpiara-nilalao taminy. Efa tamin’ny taona 2017 no nilalao tao i Marco, taorian’ ny nialany tany Frantsa.
Tsy mbola tratran’ny fihe­tsika toy izany i Marco Ilaimaharitra, araka ny fantatra. Vetivety teo ihany dia nampiseho fiaraha-mientana taminy ireo mpiara-milalao taminy, ka nanameloka izany fihetsika izany tany anatin’ny tambazotran-tserasera sosialiny avy. Toy izany ihany koa ireo mpanohana ny Barea, izay tezitra tamin’ ny fihetsika natao tamin’ny namany.
“Tsy rariny ny nanome­zana karatra mavo an’i Marco satria nampilaza ny mpitsara an-jorony izy tamin’ny fisian’ io fihetsika toherin’ny Fede­rasiona iraisam-pirenena (Fifa) io. Tsy afaka milalao izy amin’ny herinandro mana­raka, vokatr’izany”, hoy i Karim Belhocine, mpanazatra ny Charleroi. “Nandeha tsara ny resaka nataony tamin’ny mpitsara saingy nihevitra ireo mpijery fa mitaky zavatra hafa izy. Izany no antony nampafanafana kely teo aminy sy ny mpijery”, hoy hatrany ity mpanazatra ny ekipan’
i Marco Ilaimaharitra ity.
Fifidianana ben’ny tanana :: Hanohana ny kandidà Naina Andriantsitohaina koa ireo Tim teo aloha
Ahiahy hala-bato :: Miantso ny fahamailoan’ny rehetra ny Ceni